ဖေဖေ၊ မေမေ နဲ့ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ ပိုင်ဇေ၊ ဇင်သဲ - Indian Film Blog
ဖေဖေ၊ မေမေ နဲ့ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ ပိုင်ဇေ၊ ဇင်သဲ
ဘဏ်တွင် ပေါင်နှံထားသည့် အိမ်ဂရမ် ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိသားစုဝင် အချင်းချင်း စိတ်အလောတကြီး Fb မှာ တုံ့ပြန်ရေးသား ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်း၊ ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင်၊ ပိုင်ဇေရဲထွန်း ၏ ဖခင် ဦးရဲထွန်း နှင့် မိခင် တို့က MC မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် ရှင်းပြထားတာက ???
Myanmar Celeb TV Replace: Actor Paing Zay Ye Tun, Zin Thae Naing reacts on criticisms on their financial institution mortgage. #PaingZayYeHtun #ZinThaeNaing #UYeHtun, #MyanmarActor #MyanmarCelebrityFamily
Myanmar Celebrity Couple myanmar celebrity news Paing Zay Ye Htun Paing Zay Ye Tun www myanmar celebrity news com Zin Thae Naing
VLOG - Çukur Dizisinin Çekildiği Yere Gittim
ရှင်းသန့်မေ ရှင်းသန့်မေ says:
မွေးထားတဲ့သားသမီးကမကောင်းတော့ အတွင်းလူမကောင်းတော့အပြင်လူလဲဘယ်ကောင်းတော့မလဲ ချွေးမပုံကကြည့်ရတာမိန်းမလည်ပုံပေါက်တယ်နော် ရုပ်ကလေးနဲ့မလိုက်ဘူးစကားပြောတာလဲရိုင်းတယ် သူ့မိဘငါ့မိဘမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တာတကယ်သာသူ့မိဘအရင်းဆိုဒီစကားသူပြောထွက်ပါ့မလား
U thi Ha says:
ဂုဏျအနနျတ အားဂရု ထားသမို့၊ မိသားစုအားလုံး အေး ခမျြး သာယာ ကနျြး မာ လိုရာ ပွညျ့ဝ ကွပါ စေ သျော ဝျ ဂှတျလာဘျဘိုငျ့ ဘိုငျ…
Thuzar Win says:
မိ သား စု ဆို တာ ဒီ လို ဘဲ တခါ တခါ နား လည် မှု လွဲ တာ ဖြစ် တတ် ကြ ပါ တယ် ။ ဒီ ကိစ မှာအဖိုး ကလည်း သူ စိတ် လော သွား တာ ကို တောင်း ပန် ၊ သား ကလညသူ အမှား သူ ၀န် ခံ ၊ ချွေး မက လည်းသူ. အမှာ သူ ပြန် တောင်း ပန် ၊ Each person owns their mistakes, apologize and move on, this is howareal family works. They talk through whatasituation with facts. And this is family therapeutic
session. Most people find someone to blame, this leads to unhealthy relationship. This family does the opposite. Love it.
ဘဝ ခါးခါး says:
မိသားစုဆိုတာကတော့ဒီလိုပါပဲဖြစ်တတ်ပါတယ် အခုလိုနားလည်မှုပြန်ရှိကြတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ် ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုလေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ
นาง อายนา says:
ဖငိယားပြီး လျှောက် ပို့စ်နေလား၊ နာမည်ကြီးအောင်လုပ်တဲ့ နည်းတနည်းပေါ့???
လေးဆယ့်ငါးမိနစ်တောင်ရှည်တယ် တသက်လုံးတခါမှမတွေ့ဖူးဘူး MC ပိတ်တင်တာဒီတခါအကြာဆုံးပဲ ဘယ်လောက်တောင်ပစ်ကျွေးထားလည်းမသိဘူးနော် မဒိန်းမှုဖြစ်ရင်ဘယ်ပျောက်နေမှန်းမသိတဲ့ မီဒီညာတွေ မင်းတို့မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်တော့မယ် မင်းတို့အိမ်တွေလည်းပြန်ကြည့်ကြပါအုံး the conjuring တွေဖြစ်နေပီ 💀💀💀
orange me says:
b gasays:
ဖာသေမ စောက်ပတ်တွေလို့ဘဲ ကိုယ်မေကိုလိုးတွေ ဖေလိုးမတွေက စကားကိုအမျိုးပြောနေကြတယ် ဆဲတုန်းကလဲဒီစောက်ပါးစပ်တွေဘဲ အကောင်းပြောလဲဒီစောက်ပါးစပ်တွေဘဲ လီးဘဲအကုန်လုံးကို ဖြစ်တဲဟာကဖြစ်တာဘဲ ဘာနဲနဲဖုံးဖုံးမပျောက်ဘူး မှတ်ထားလိုက် မအေလိုးတွေ ဖအေလိုးမတွေ
Too Plae says:
I think about you kids they all OK with you?
မြိတ်သားလေး ကာရံ says:
W Doaw says:
အမှန်တရားကဘုရားသိတယ်ကိုယ်သိတယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်မမရယ် တပါးသူရဲ့ခံစာချက်ကိုလိုက်ခံစားဖို့မသင့်ဘူးပေါ့နော် အဆင်ပြေပါစေ
Duat Te says:
I am so sorry to here this….
ဂစ်တာ Chit says:
gindai hpaji says:
Angle Soe says:
Naw Thieri says:
ကြည့်ရတာ အဖိုးနဲ့အဖွားက ချွေးမရဲ့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲကို ကိုကြည့်နေရတဲ့ပုံပဲ
ခုကျတော့လည်း ဇင်သဲနိုင်က အကောင်း ဖြစ်သွားရပြန်ပြီပေါ့
yes Uu says:
အကုန်လုးံကိုနားလည်ကါတယ်fightingသဲသဲပြောတာလဲမှနိပါတယ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ လိုရင်ကောင်းတယ်မလိုရင်မကောင်းတတ်ကြဘူး ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် လင်မယားတွေအချစ်ွမလျော့စေနဲ့နော် အရင်ကလ်ုချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ပဲနေပြါနေ် ဆက်အားပေးနေပါတယ်
မိဘကိုငိုပြီးသွားပြီ အပစ်တော့ဖြစ်သွား တယ် ဖြစ်နိူင်ရင်လေ ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဦးခေါင်းဖြင့် မိဘရဲ့အနိမ့်ဆုံးနေရာခြေဖမိုးကို ထိပြီး ပြန်တောင်းပန်လိုက်ပါ ခွင့်လွတ်ပါကြောင်းပေါ့ နောက်ပြီးမိဘကလဲ သားသမီးကိုပြန်လည်ကံကောင်းကြပါစေချင်းအကျိုးဌါ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ့့ ကောင်မလေးရေ သမီးက အပြောဆပ်တယ် သမီးသေချာလုပ်လိုက်ပါနော် စေတနာများစွာဖြင့် K F C
Rocker Kyar Gyii says:
Paul Zau says:
Nabule Ka Simale says: